Ala-agba Manufacturer, Ala-eweta soplaya - Na-agba elu
Anyị na-e mere ka Nlụpụta na ịzụlite agịga ala biarin na cylindrical ala biarin na mpaghara nnyefe. Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji ụgbọala, ọgba tum tum, igwe akwa akwa ulo oru, igwe akuku, ngwaọrụ eletrik, ulo oru robot RV mbelata na outboard maqbx chekwe wdg.
Changzhou Top-agba Co., E guzobere Ltd na July 2007, ụlọ ọrụ anyị na-ekpuchi mpaghara nke 25000m2, ya na mpaghara ihe dika 23000m2 na 136 ndị ọrụ, na nsonye 12 ndị ọkachamara. Anyị na-amalite ịkwado Koyo site na 2014 na anyị nwere ike ịmepụta teknụzụ dị elu na teknụzụ Japan, nke nwere ike dochie anya biarin Taiwan.
CNTP ala agba emeputa & soplaya arụpụta iche iche nke agịga rollers na agịga biarin, dị ka K usoro-radial agịga rollers na onu mgbakọ, HK usoro-adọrọ mmasị-cup agịga biarin, HF usoro- Dọrọ cup agịga clutches, NK usoro-oké ọrụ agịga biarin na AXK usoro-inupụ agịga ala na onu mgbakọ.
Anyị ngwaahịa e exported na USA, UK, Jamanị, India, Korea, Taiwan na mba na mpaghara ndị ọzọ. Na 2019, olu ahịa bụ 7.5 nde US dolla, nke banyere 1.5 a na-ebupụ nde dollar US na Germany ozugbo, UK, USA, wdg.